INCWADANA YEZINDLU - I-Airbnb
Igumbi lakho lokulala e igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle sinombuki zindwendwe onguBobby
Ipropathi entle, efihlakeleyo imizuzu engama-20 ukusuka edolophini eNashville. Uziva ngathi yindlu yomthi! Iindwendwe zineendawo ezi-3 ezihlukeneyo, ezizimeleyo ezidityaniswa ngedekhi zangaphandle. Le ndlu inekhitshi, ibhedi, igumbi lokuhlambela kunye neziko. "Igumbi elikhulu" ligumbi lokuhlala elikhulu elinendawo yokuhlala, itafile yepub, iTV enkulu ekhuselweyo, kunye nebhodi yedart. Ngaphezu koko, iindwendwe zine-gazebo ekhuselweyo kunye nomgodi womlilo wegesi. Awukwazi ukubetha ukuzola okanye iimbono! Yimizuzu emi-5 kuphela ukuya kwiivenkile zasekhaya kunye neendawo zokutyela.
Iindwendwe zinokufikelela kwizithuba ezi-3 ezahlukeneyo ezibucala kwaye zisetyenziselwa zona kuphela. I-Wifi yasimahla kuyo yonke indawo kwipropathi.
Le ndlu inebhedi enkulu, ikhitshi eligcweleyo, kunye negumbi lokuhlambela elineshawa enkulu yokuma. Ikhitshi ligcwele isitovu segesi/ioveni, imicrowave, ifriji, umenzi wekofu iKeurig, kunye nesinki (akukho matshini wokuhlamba izitya). Indawo yokuhlala inendawo yomlilo yegesi kunye ne-Smart TV egcwele iHulu kunye neNetflix. Sibonelela ngekofu, iswekile, icreamer, iibar zegranola, iipopcorn, kunye namanzi. Kukho ishampoo, i-conditioner, ukuhlamba umzimba, kunye nesomisi seenwele ukwenzela ukuba ube lula. Unomnyango wangaphambili kunye nomnyango ongasemva okhokelela kwiidesika ezintle, "Igumbi elikhulu" indawo yokuhlala, kunye ne-gazebo ekhuselweyo.
"IGumbi eliKhulu" yindawo entsha apho iindwendwe zinendawo epheleleyo, yabucala. Ibandakanya indawo enkulu yokuhlala, itafile yesitayile se-pub yokutyela okanye ukudlala amakhadi, ibhodi yedart, indawo yokubasa iinkuni, kunye nescreen esikhulu seTV esigcwele iHulu & Netflix. Uhlobo lweHulu kwiGumbi eliKhulu libandakanya iTV ebukhoma! Iindonga zomsedare kunye neglasi enemibala ngaphakathi kweGumbi elikhulu zenza indawo yokuxhoma yamehlo.
Yiba nekofu yakho yasekuseni ngaphakathi kwendawo yangasese, enemithi. I-gazebo ekhuselweyo ibandakanya indawo yokuhlala, umgodi womlilo werhasi, kunye nefeni yesilingi kobo busuku bushushu behlobo. Awuyi kufuna ukuhamba.
Indawo kaBobby ikwiKingston Springs, Tennessee, eUnited States.
Ipropathi entle, eyenziwe ngamaplanga kwiihektare ezi-1.5. I-0.5 yeekhilomitha kuphela ukusuka kwi-interstate (I-40). Imizuzu emi-5 ukusuka kwidolophu yaseKingston Springs. Imizuzu engama-20 ukusuka edolophini eNashville.
-Ivenkile yegrosari: Lawrence Foods (evula 8am ukuya 9pm), 1.5 miles kude
-Iintlobo ngeentlobo / ivenkile ngokubanzi: Idola Jikelele (ivula i-8am ukuya ku-10pm), i-1.5 yeemayile kude
IDowntown Kingston Springs (iivenkile, iivenkile zokutyela, ithala leencwadi, istudiyo seyoga, iicawe): 2.5 yeemayile kude
-Ivenkile yotywala: Dude's, 0.7 miles
-Burns Park (umzila wokuhamba, ichibi, indawo yokudlala): iikhilomitha ezi-3 kude
-Imizuzu eyi-15 ukuya eHarpeth River State Park (ukuhamba intaba, i-zip lineing, ukukhwela iphenyane)
-1 ukuphuma kwindawo yodumo iLoveless Cafe
-2 ukuphuma apho kukho iPublix, iStarbucks, iDepo yasekhaya, iMakethe yamaFama eSprouts, iPercy Warner Park, iCheekwood, njl.
Ukuba sikhona, siya kudibana nawe xa ungena ukuze sikubonise malunga nepropati. Ukuba asifumaneki, siyakuhamba nawe ngokuzihlola ngefowuni. Emva koko, ufikelela kuyo yonke into ngokwakho usebenzisa i-keypad. Akunyanzelekanga ukuba usibone ngaphandle kokuba uyafuna/ufuna ukusibona. Akukho mfuneko yokudibana nathi ekuphumeni, vele utshixe yonke into. Sifumaneka kangangoko okanye kancinci njengoko ufuna ngexesha lokuhlala kwakho. Zive ukhululekile ukubuza nayiphi na imibuzo! Sibe ngabahlali baseNashville iminyaka eli-10 kwaye siyakuvuyela ukunceda ngeengcebiso zale ndawo.
Ireyithi yokuphendula: 100%
Ixesha lokuphendula: ngaphakathi kweyure
Ukuba sikhona, siya kudibana nawe xa ungena ukuze sikubonise malunga nepropati. Ukuba asifumaneki, siyakuhamba nawe ngokuzihlola ngefowuni. Emva koko, ufikelela kuyo yonke into ngo…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Kingston Springs